Ho an'i Chevrolet Silverado Super Crew - Changzhou Deao Vehicle Technology Co., Ltd.
Ilay Mat Maty Fiara 3D natokana
HO AN'NY CHEVROLET SILVERADO
Vokatra avo lenta an'ny CHANGZHOU DEAO
Mampiseho ny fenitra avo lenta an'ny
vokatra mat ny fiara manerantany.
Fampivoarana vaovao sy fisehoana mirindra kokoa
Famolavolana lavaka voatokana
HITARITRA NY FIASA
Ny famolavolana lamina manokana eo amin'ny farany ambany
mampitombo ny fangejana ny tsihy fiara
ary miharihary ny fiatraikany anti-skid
ary ny sliding dia tsy hisy fiatraikany amin'ny fiara.
Ny fitaovana fiarovana ny tontolo iainana TPE dia azo antoka tanteraka na dia eo amin'ny tontolon'ny mari-pana ambony aza.
Izy io dia novokarina teo ambanin'ny fenitra roa heny an'ny ISO9001 sy FMVSS302
Data momba ny fiara tany am-boalohany, kinova iray isaky ny fiara, kinova fanarahana
3D firafitra, tsipika ankapobeny tsara tarehy
Ny famolavolana lamina fantsona mandroso dia afaka manangona ranon-javatra, fasika,
ka tsy mila miahiahy momba ny tany sy ny rano mandoto ny kiraronao ianao,
na koa manondraka kapoaka Coke antsasaky ny vatan'ny fiara.
Tsy misy fahasimbana amin'ny fametrahana tany am-boalohany.
Tsy misy fiatraikany amin'ny fampiasana ny fiara tany am-boalohany.
Bobongolo lafo vidy, pataloha miverina ary taolana nohamafisina
Mifanentana ny tokonam-baravarana nefa tsy manakana ny varavarana.
Ny sisin'ny lasitra fanindronana dia milamina sy tsara tarehy.
Ny dingan'ny famolavolana tsindrona dia famolavolana iray, tsy misy fanodinana fanampiny, fahadiovana avo amin'ny akora, plastika avo lenta, ary fahaiza-miasa sy kalitao tsara kokoa.
Vidiny mora, tsy mahatratra studs
Kalitaon'ny fitaovana tsy dia tsara
Ny lasitra blister dia tsy nofehezina tanana.